थुइक्क ! कम्युनिस्ट भनाउँदाहरू पद भनेपछि नालिमा मुख गाड्न पनि तयारः सुदन किराँती – Purba Aawaj
थुइक्क ! कम्युनिस्ट भनाउँदाहरू पद भनेपछि नालिमा मुख गाड्न पनि तयारः सुदन किराँती
प्रकाशित मिति: शनिबार, भाद्र १२, २०७८ समय: १६:३८:०८
‘काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रभाव शाली युवा नेता एवम सांसद सुदन किरातीले कम्युनिस्ट भनाउँदाहरू पद भने पछि नालिमा मुख गा`ड्न पनि तयार भएको टिप्प णी सामाजि क सञ्जालमा गरेका छन् ।
तर उनले यो कुन सन्दर्भमा लेखेका हुन स्प,ष्ट पारेका छैनन् । ‘किराँतीले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेखेका छन- “थुइक्क हामी कम्युनिस्ट भनाउँदाहरु पद भने पछि नालिमा मुख गाड्न पनि तयार । नोट स् खाएको मात्र भएत हुन्थ्यो नि घि,चेर म,रेछ।
”देउवा सरकारले चाडै मन्त्रीमण्डल बिस्तार गर्ने तयारी थालेको छ,।‘मन्त्रालय भागबन्डा गर्दा नेकपा माओवादी केन्द्रलाई ६ वटा मन्त्रालय परेका छ । त्ससमा सु’दन किराँती पनि मन्त्री बन्ने चर्चा चल्दै आए को छ ।
दुई पटक सम्म प्रतिनिधि सभाको चुना वमा जित्ता पनि मन्त्री नबन्ने किराँती एक्लो सांसद हुन । ‘भोजपुर जिल्लाबाट निर्वाचित संसद् किराती विकास र समृ द्धिले भरिपूर्ण नेपाल, संसारकै शान्त र सुन्दर नेपालको सपना देख्ने र नेपाली ज`नशक्ति
‘वैदेशिक रोजगारीमा जान नपरोस् भन्ने बिचार प्रस्तुत गर्ने युवा नेताको रूपमा आफूलाई स्थापित गरेका नेता हुन । मेरो देश बाट
Last Updated on: August 28th, 2021 at 4:38 pm